WARARKA BARAAWEPOST sabti 29 december 2007
XILKA SULDAANKA TUNNI SHANGAMAAS/TOORRE
Waxaa maalmahanba socda qoraallo badan oo looga hortagayo laguna dhaliilayo Faqi Said Faqi, ka dib markii website-ka Marka Caddeey ay sheegtay in Faqi loo caleema saaray xilka Sudlaanka Tunni Shangamas, inkastoo aanay Marka caddey caddaynin cidda sheegtay ama ay ka soo werisay warkaas
Waxaa qoraalladaas qaarkood lagu sheegay in tan iyo markii uu dhintay Suldaan Faqi Xaaji Awiisa aan la magacaabin suldaan kale, ilaa laga soo gaaray xilligii Siyaad Barre (siddeetameeyadii) oo markaas Xaydar Suufi loo caleema saaray suldaanimada.
Qoraalladaas waxay intaas raaciyeen in Marxuum Suldaan Cumar_Saciid Faqi Xaaji Awiisa uusan suldaan ahayn, balse xataa shirka dib u heshiisiinta Carta uga qayb galay asagoo metelaya Suldaan Xaydar Suufi Munye oo waddanka ka maqnaa, markii uu dhintay ka bacdina si toos ah suldaanimada ugu soo noqonayso Suldaan Xaydar Suufi.
Runtii haddii uu qof tolka ka mid ah qaldamo, waxaa waajib ah in runta la sheego xaqana la caddeeyo wixii qalad ah ee dhacayna la saxo, iyadoo aan wax la buunbuunin eexashona ay meesha soo gelin. Qofka qalad ku tilmaamay dariiqadda Faqi lagu magacaabay, waxaa laga rabay inuu iska ilaaliyo inuu isla qaladkii oo kale ku dhaco, waxayna ahayd inuu ka aamuso inuu qof kale ku sheego Suldaannimo.
Arrinta qofka noqonaya Suldaanka Guud ee Tunni Shangamaas & Tunni Toorre waa arrin u taalla Tunni, cid kale inay soo faragashatana ma aha. Suldaan Cumar Saciid Faqi dhimashadiisa (Sept. 15, 2007) waxaa ka soo wareegatay in ka badan saddex bilood, waxaa la inaga rabay inaan mar hore is xilqaanno oo laga hadlo ninka buuxinaya jagadaas uu ka tagay, laakiinse sida muuqata arrintaas lama siinin ahamiyadda ay mudnayd,
ilaa ay ka soo baxday arrinta Faqi, oo markaas ka bacdi cid ay khuseyso iyo cid aysan khusayninba mowduucan ka hadlaysa, waxaana la soo saaray qoraallo ay ku saxiixan yihiin dad aad u fara badan oo aan qaarkood wax shaqa ah ku lahayn Tunni oo ka hadlaya ninka iska leh xilka suldaanimada Tunni.
Xataa qoraalka ay soo saareen nabaddoonnada jooga Baraawe ma soo hadal qaadin wixii laga samayn lahaa xilka Suldaanka, waxay ku ekaadeen keliya inay cambaareeyeen magacaabista Faqi, iyo inay caddeeyeen in wixii khuseeya Tunni Shangamaas/Toorre lagala xiriiro ama la waydiiyo odayaasha (nabaddoonada) jooga Baraawe.
Waxay ila tahay in la joogo waqtigii khilaafka la soo afjari lahaa, lana is nidaamin lahaa, sidaa darteed waxaa muhim ah in arrimaha soo socda si dhaqsa ah wax looga qabto:
1- In odayaasha dhaqanka (Nabaddoonnada) waddanka gudihiisa ku sugan iyo odayaasha jooga waddanka dibaddiisa wada tashi ay sameeyaan, la iskuna raaco qofkii buuxin lahaa jagada Suldaanimada, si rasmi ahna loo shaaciyo magaciisa.
2- In waddan kasta oo jaaliyad Tunni ah ay joogto loo doorto hal qof oo la isku raacsan yahay oo wakiil ka noqda Suldaanka, arrimaha jaaliyadda khusayana asaga lagu ogaado, xiriir joogta ahna uu la yeesho odayaasha waddanka gudihiisa ku sugan.
3- In la sameeyo nidaam qoran oo lagu habeeyo arrimaha la xiriira hoggaanka Tuni, oo si faahfaahsan uga hadlaya sidii loo magacaabi lahaa ama loo kala dhaxli lahaa xilalka Nabaddoonnada & Suldaanka Tunni, Ciddii iska leh awoodda magacaabista, qofka xaqa u leh in loo magacaabo, sidii loo kala horeeyo iwm, oo wixii markaas ka dambeeya aan wax khilaaf ah dhicin haddii mid ka mid ah xilalkaas uu bannaanaado.
4- In la magacaabo Afhayeen ku hadla magaca Tunni, uuna ahaado qofka keliya ee idaacadaha, website-yada iwm, si rasmi ah uga hadli kara arrimaha khuseeya Tunni, wixii aan asaga sheeginna aysan Tunni mas'uul ka ahaan doonin.
Waxaan rajaynayaa haddii talo la isku darsado, si niyad lehna looga shaqeeyo danta guud ee Tunni inay wax walba noo hagaagi doonnaan, gaar ahaan iyadoo lagu jiro waqti xun oo cadawgeenna dibadda uu badan yahay, lagama maarmaana ay tahay in la isku xirnaado, wixii khilaaf keeni karana laga fogaado
Axmed Maxamed Sheikh Sayid
Abu Dhabi - Dec. 29, 2007 sayidahmad@hotmail.com